MAQAAL: MUDANE MADAXWEYNE GUUXA SHACABKA MAQAL | Puntlandes.com
MUDANE MADAXWEYNE GUUXA SHACABKA MAQAL
Lama dhihi karo dowladaadu wax horumar ah kuma talaabsan. Waxaa horumar laga gaaray dhinaca nabadgelyada caasimada iyo nawaaxiga ku wareegsan. Waxaa laga hortegay abaaro dad iyo duunyo intaba xaalufinlahaa. Waxaa kale oo aan la iska indhotiri Karin xaalada dhaqaale, siyaasadeed, iyo nabadgelyo ee wadanku ku sugnaa markii lagu doortay. Somalidu waxay ku mahmaahdaa “ NIN XIL QAADAY EED QAAD” waxaad u bareertay in aad howshaan dhabarka u dhigato. Hase ahaatee waxaa soo baxaya habacsanaan ku aadan horumar la’anta ama wax qabadka hey’adaha dowliiga ah. Waxaan meesha ka muuqan yididiilooyinkii aad ku hamineysey xiligii aad tartanka ku jirtay oo haldhigoodu ahaa: